Asetenam Nsɛm: Mmea Ahotefo Abɛyɛ Yehowa Asomfo | Felisa ne Araceli Fernández
KENKAN WƆ Afrikaans Aukan Baoule Batak (Karo) Batak (Toba) Betsimisaraka (Southern) Bislama Cakchiquel (Western) Cambodian Chitonga Chokwe Chol Cibemba Cinyanja Dangme Drehu Efik English Ewe Fon French Ga Garifuna Greenlandic Haitian Creole Hausa Hmong (White) Iban Igbo Isoko Italian Javanese Karen (S'gaw) Kazakh Kikaonde Kikongo Kiluba Kisi Kisonge Kongo Krio Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Lingala Lunda Luvale Maltese Mam Mambwe-Lungu Mauritian Creole Mazatec (Huautla) Mbunda Mixe Mizo Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Nyaneka Nzema Otetela Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Saramaccan Sepedi Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Silozi Spanish Swahili (Congo) Swati Tahitian Tiv Tlapanec Tojolabal Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Twi Tzeltal Umbundu Urhobo Uruund Venda Wallisian Wayuunaiki Welsh Xhosa Yoruba Zulu
Mmea Ahotefo Abɛyɛ Yehowa Asomfo
Felisa ne Araceli Fernández anom nsɛm
BERE bi, me nuabea kumaa Araceli bo fuw me. Ɔteɛɛm sɛ: “Gyae ka na minnyae tie. Mempɛ sɛ woka wo som ho asɛm biara kyerɛ me. Mete a na biribi abɛhyɛ me bo. Mempɛ nea woreyɛ no!” Asɛm a ɔkae no yɛɛ me yaw paa. Seesei madi mfe 91, nanso me werɛ mfii saa asɛm no. Sɛnea Ɔsɛnkafo 7:8 ka no, “asɛm awiei ye sen ne mfiase.”—Felisa.
Felisa: Wɔtetee me wɔ abusua bi a edi hia mu wɔ Spain. Ná yɛn abusua no yɛ Katolekfo, na na yɛmfa yɛn som nni agorɔ koraa. Nokwasɛm ne sɛ, na m’abusuafo 13 bi wɔ asɔre no mu a, sɛ wɔnyɛ asɔfo a, na wɔyɛ asɔre no adwuma. Ná me wɔfa yɛ ɔsɔfo ne ɔkyerɛkyerɛfo wɔ Katolek sukuu bi mu. Bere a owui no, Pope John Paul II yɛɛ no ɔhotefo de hyɛɛ no anuonyam. Ná me papa yɛ ɔtomfo, na na me maame nso yɛ kua. Ná yɛyɛ anuanom baanum. Me na na meyɛ abakan.
Midii mfe 12 no, Spainfo twaa wɔn ho koe. Ɔko no akyi no, esiane sɛ aban no ani annye adwene a na me papa kura wɔ amanyɔsɛm ho nti, wɔde no too afiase. Ná ɛyɛ den sɛ me maame benya aduan ama yɛn nyinaa. Enti ɔde me nuabeanom nkumaa baasa, Araceli, Lauri, ne Ramoni kɔtenaa mmea ahotefo (nuns) bi fie wɔ Bilbao. Ɛhɔ de, na wobenya aduan adi.
Araceli: Saa bere no, na madi mfe 14, na Lauri adi mfe 12, na na Ramoni nso adi mfe 10. Yɛn ani gyinaa yɛn abusuafo paa. Ná yesiesie ahotefo fie hɔ. Mfe mmienu akyi no, mmea ahotefo no de yɛn kɔɔ ahotefo fie kɛse bi mu wɔ Zaragoza. Ná wɔhwɛ nkwakoraa ne mmerewa wɔ hɔ. Adwuma a na yɛyɛ wɔ hɔ de siesie gyaade no ma yɛbrɛe paa.
Felisa: Bere a wɔde me nuanom no kɔɔ ahotefo fie wɔ Zaragoza no, me maame ne me wɔfa a ɔyɛ ɔsɔfo wɔ yɛn kurom no de me kɔkaa wɔn ho. Ná wɔpɛ sɛ wɔtetew me ne aberante bi a ɔpɛ m’asɛm ntam. Esiane sɛ na medɔ Onyankopɔn nti, na m’ani gye ho sɛ mɛkɔ hɔ bi. Ná mekɔ asɔre daa, na na mepɛ sɛ meyɛ Katolekni ɔsɛmpatrɛwni te sɛ me nuabarima a ɔwɔ Afrika no.
Benkum: Zaragoza ahotefo fie, Spain; nifa: Nácar-Colunga Bible nkyerɛase
Mihui sɛ merentumi nyɛ nneɛma pii a mepɛ sɛ meyɛ wɔ ahotefo fie hɔ. Ná mmea ahotefo no mpɛ sɛ mekɔsom Onyankopɔn wɔ ɔman foforo so sɛnea na mepɛ no. Ɛno nti, bere a midii afe baako wɔ hɔ no, mesan kɔɔ me kurom kɔhwɛɛ me wɔfa a ɔyɛ ɔsɔfo no. Meyɛɛ efie nnwuma maa no, na na anwummere biara yɛbom de Rosary bɔ mpae. Ná m’ani gye ho paa sɛ mɛhyehyɛ nhwiren asisi asɔredan no mu na masiesie Maria ne “ahotefo” a aka no ahoni.
Araceli: Bere a mewɔ Zaragoza no, mekaa ntam a edi kan a ɛbɛma mabɛyɛ ɔhotefo no. Ɛno akyi no, mmea ahotefo no tetew me ne me nuanom no ntam. Wɔde me kɔɔ ahotefo fie bi mu wɔ Madrid, na wɔde Lauri kɔɔ ahotefo fie bi mu wɔ Valencia. Ramoni kaa Zaragoza. Madrid na mekaa ntam a ɛto so mmienu a ɛbɛma mabɛyɛ ɔhotefo no. Nnipa pii bɛtenaa ahotefo fie hɔ. Ebinom yɛ sukuufo, na ebinom nso yɛ nnipa a wɔn mfe akɔ anim. Enti na adwuma pii wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ meyɛ. Ná meyɛ adwuma wɔ ayaresabea a ɛwɔ ahotefo fie hɔ.
Ná mehwɛ kwan sɛ mɛyɛ ɔhotefo. M’adwene yɛɛ me sɛ yɛde bere pii bɛkenkan Bible na yɛasua. Nanso amma saa. Obiara amfa Bible anyɛ adwuma, na na wɔnka Onyankopɔn anaa Yesu ho asɛm mpo wɔ hɔ. Misuaa Latin kakra; misuaa Katolek “ahotefo” ho ade, na mesom Maria. Nanso mpɛn pii no, yɛyɛɛ adwumaden.
Nneɛma fii ase hyɛɛ me so, na me ho yeraw me. Mihui sɛ ɛsɛ sɛ meyɛ adwuma nya sika de boa m’abusuafo sen sɛ mɛyɛ adwuma wɔ ahotefo fie ma afoforo mmom anya wɔn ho. Enti mekaa me haw no ho asɛm kyerɛɛ mmea ahotefo no panyin paa no. Meka kyerɛɛ no sɛ mepɛ sɛ mifi ahotefo fie hɔ. Nanso ɔde me hyɛɛ dan mu too mu. Ná n’adwene yɛ no sɛ, sɛ ɔyɛ me saa a, ɛbɛma masesa m’adwene.
Mmea ahotefo no yii me fii dan no mu, nanso bere a wohui sɛ mayɛ m’adwene sɛ mefi hɔ no, wɔsan de me hyɛɛ dan mu too mu. Bere a wɔde me hyɛɛ dan mu too mu ne mprɛnsa so akyi no, wɔka kyerɛɛ me sɛ, sɛ mekyerɛw asɛm a edi hɔ yi a, wɔbɛma makɔ. Wɔkae sɛ menkyerɛw sɛ: “Nea enti a mepɛ sɛ mekɔ ne sɛ, mepɛ sɛ mekɔsom Satan mmom sen sɛ mɛsom Onyankopɔn.” Me ho dwiriw me paa. Ɛwom sɛ na mepɛ paa sɛ mifi hɔ de, nanso meyɛɛ m’adwene sɛ merenkyerɛw saa asɛm no. Awiei koraa no, mekae sɛ mepɛ sɛ me ne ɔsɔfo bi kɔkasa. Mekaa nea wɔde ayɛ me no nyinaa kyerɛɛ no. Ɔsɔfo panyin no maa no kwan sɛ obetumi de me asan akɔ Zaragoza ahotefo fie. Midii abosome kakra wɔ hɔ no, wɔmaa me kwan sɛ menkɔ fie. Ɛno akyi bere tiaa bi no, Lauri ne Ramoni nso fii ahotefo fie hɔ.
NHOMA A ƐMAA YƐN MU PAAPAEE
Felisa: Bere bi akyi no, mewaree, na me ne me kunu kɔtenaa Cantabria. Ɛyɛ ɔmantam bi a ɛwɔ Spain. Na meda so ara kɔ asɔre. Kwasida bi, ɔsɔfo no de abufuw teɛɛm sɛ, “Monhwɛ saa nhoma yi!” Ɔde Nokware a Ɛde Kɔ Daa Nkwa Mu nhoma no kyerɛɛ yɛn. Ɔkae sɛ, “Sɛ obi ama wo nhoma yi bi a, fa brɛ me anaa kɔtow kyene!”
Na minni saa nhoma no bi, nanso asɛm a ɔkae no maa m’ani begyee ho. Afei, nna kakra bi akyi no, mmea baanu bi baa me fie. Ná wɔyɛ Yehowa Adansefo, na wɔmaa me saa nhoma no bi. Anadwo no ara, mekenkanee. Bere a mmea no san baa me nkyɛn no, wobisaa me sɛ mepɛ sɛ misua Bible anaa, na mepenee so.
Nokware nhoma no
Efi me mmofraase nyinaa, na ade a ɛda me koma so paa ne sɛ mɛyɛ nea ɛsɔ Onyankopɔn ani. Afei mihuu Yehowa yiye, na ne ho dɔ a mewɔ no mu yɛɛ den. Ná mepɛ sɛ meka ne ho asɛm kyerɛ obiara. Wɔbɔɔ me asu afe 1973. Bere biara a ɛbɛyɛ yiye no, na mebɔ mmɔden ka nokware no ho asɛm kyerɛ m’abusuafo. Nanso m’abusuafo, ɛnkanka me nuabea Araceli, kae sɛ Adansefo no adaadaa me.
Araceli: Ateetee a mefaa mu wɔ ahotefo fie hɔ nti me bo fuwii, na na m’ani nnye asɔre no ho bio. Nanso Kwasida biara na mekɔ asɔre de Rosary bɔ mpae. Ná mepɛ sɛ mete Bible ase, enti mebɔɔ mpae sɛ Onyankopɔn mmoa me. Saa bere no ara na Felisa kaa nea wasua ho asɛm kyerɛɛ me no. Ná n’ani gye nea wasua no ho araa ma m’adwene yɛɛ me sɛ gyama biribi reyɛ no. Mannye asɛm a ɔreka no anni.
Akyiri yi, mesan kɔɔ Madrid kɔyɛɛ adwuma, na ɛno akyi no mewaree. Ná mahyɛ no nsow sɛ wɔn a wɔkɔ asɔre daa no mfa Yesu nkyerɛkyerɛ mmɔ wɔn bra. Wei nti migyaee asɔre kɔ. Afei “ahotefo” oo, Ɔbonsam gya oo, na minnye nni bio. Saa ara nso na na minnye nni sɛ ɔsɔfo betumi de obi bɔne akyɛ no. Metow atoro som ahoni a mewɔ nyinaa gui. Na minnim sɛ nea mereyɛ no ye anaa enye. Ɛwom sɛ na m’abam abu de, nanso mekɔɔ so bɔɔ Onyankopɔn mpae sɛ: “Mepɛ sɛ mihu wo. Boa me!” Mekae sɛ Yehowa Adansefo bɛbɔɔ me pon mu mpɛn pii, nanso mammue wɔn. Ná minnye ɔsom biara nni bio.
Ná me nuabea Lauri te France, na na Ramoni nso te Spain. Bɛyɛ afe 1980 no, wofii ase ne Yehowa Adansefo suaa ade. Saa bere no nyinaa na migye di sɛ wonnim sɛ wɔrekyerɛkyerɛ wɔn atosɛm. Ná m’adwene yɛ me sɛ wɔredaadaa wɔn sɛnea na wɔadaadaa Felisa no. Akyiri yi, mihyiaa Angelines a na me ne no te borɔn baako so. Yɛbɛyɛɛ nnamfo paa. Ná ɔno nso yɛ Yehowa Dansefo. Angelines ne ne kunu bisaa me mpɛn pii sɛ me ne wɔn besua Bible anaa. Ɛwom sɛ na meka sɛ m’ani nnye nyamesom ho de, nanso wohui sɛ na mepɛ sɛ mihu Bible mu. Awiei koraa no meka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ mobɛma mahwɛ m’ankasa Bible mu a, ɛnde mesua!” Ná mewɔ Nácar-Colunga Bible nkyerɛase no bi.
AWIEI KORAA NO, BIBLE KAA YƐN BOOM
Felisa: Bere a mebɔɔ asu afe 1973 no, na Adansefo bɛyɛ 70 na wɔwɔ Santander. Ná ɛyɛ Cantabria mantam no ahenkurow. Ná yetwa kwantenten ansa na yɛakɔka asɛmpa no akyerɛ nnipa a wɔwɔ nkuraa ɔhaha pii a ɛwɔ ɔmantam no mu no. Sɛ yɛrekɔka asɛmpa no wɔ nkuraase a, na yɛfa bɔs kosi baabi na afei yɛde kar atoa so.
Mfe pii a atwam no, me ne nnipa bebree asua Bible no na wɔn mu 11 abɔ asu. Ná wɔn a me ne wɔn sua ade no dodow no ara yɛ Katolekfo. Na ɛsɛ sɛ minya wɔn ho abotare. Ná wɔte sɛ me ara, enti ná ebegye bere kakra ansa na wɔahu sɛ nea wogye di no yɛ atoro. Na minim sɛ Bible ne Yehowa honhom nkutoo na ebetumi aboa obi ma wasesa n’adwene na wahu nokware no. (Hebrifo 4:12) Me kunu Bienvenido a na ɔyɛ polisini no bɔɔ asu afe 1979. Bere a me maame fii ase suaa Bible no, ankyɛ na owui.
Araceli: Bere a me ne Yehowa Adansefo fii ase suaa Bible no, na m’adwene yɛ me sɛ merentumi nnye wɔn nni. Nanso bere bi akyi no, mesesaa m’adwene. Mibehui sɛ Bible na Adansefo no de kyerɛkyerɛ na wɔde mu nsɛm nso bɔ wɔn bra. Mifii ase nyaa Yehowa ne Bible mu gyidi, na m’ani gyei paa. Nkurɔfo a me ne wɔn te borɔn baako so no huu saa nsakrae yi, na wɔka kyerɛɛ me sɛ, “Araceli, nsan w’akyi; kɔ so yɛ nea woreyɛ no!”
Mekae sɛ mebɔɔ mpae sɛ, “Yehowa, meda wo ase sɛ woannyae m’akyi di. Woama manya hokwan pii de ahu Bible mu nokware nimdeɛ—ɛno na na merehwehwɛ.” Mesan paa me nuabea Felisa kyɛw sɛ ɔmfa nsɛm a meka tiaa no no nyinaa nkyɛ me. Efi saa bere no, yɛannye akyinnye bio, na mmom yɛde anigye bɔɔ Bible mu nkɔmmɔ. Mebɔɔ asu afe 1989. Saa bere no, na madi mfe 61.
Felisa: Seesei madi mfe 91. Me kunu awu, na mintumi nyɛ pii sɛ kan no. Nanso mekenkan Bible da biara da, na bere biara a metumi no, mekɔ asafo nhyiam ne asɛnka.
Araceli: Ebia na mayɛ ɔbea ɔhotefo pɛn nti, mede anigye kaa Yehowa ho asɛm kyerɛɛ asɔfo ne mmea ahotefo biara a na mihyia wɔn. Me ne wɔn mu binom abɔ nkɔmmɔ a ɛyɛ anigye, na wɔn mu pii agye nhoma ne nsɛmma nhoma. Mekae ɔsɔfo baako bi paa. Bere a me ne no bɔɔ nkɔmmɔ nna kakra no, ogyee asɛm a mereka no toom. Afei, ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Baabi a manyin adu yi, ɛhe na metumi akɔ? Dɛn na m’asɔremma ne m’abusuafo bɛka?” Memaa no mmuae sɛ: “Dɛn na Onyankopɔn nso bɛka?” Ohui sɛ nea mereka no yɛ nokware, na mihui sɛ ne werɛ ahow. Nanso ɛyɛɛ me sɛ onni akokoduru a ɔde bɛyɛ nsakrae.
Me werɛ remfi ɛda a me kunu kae sɛ ɔne me bɛkɔ asafo nhyiam no da. Bere a edi kan a ɔkɔɔ asafo nhyiam no, na wadi bɛboro mfe 80. Ɛno akyi no, asafo nhyiam biara ampa ne ti so da. Osuaa Bible na ofii ase yɛɛ asɛnka adwuma. Sɛ mekae sɛnea na me ne no kɔ asɛnka a, na m’ani agye kwa. Aka bosome mmienu ma wabɔ asu na owui.
Felisa: Mifii ase som Yehowa no, me nuanom nkumaa baasa no sɔre tiaa me, nanso akyiri yi, wɔn nso gyee nokware no. Ɛyɛ ade baako a ɛma m’ani gye paa. Nokware no a wogyei no ama yɛde anigye bɔ yɛn Nyankopɔn Yehowa ne n’Asɛm ho nkɔmmɔ. Merekasa yi, yɛn nyinaa resom Yehowa. *
^ nky. 29 Araceli adi mfe 87, Felisa adi mfe 91, na Ramoni adi mfe 83. Wɔn nyinaa gu so de nokwaredi resom Yehowa. Lauri wui afe 1990, na ɔno nso de nokwaredi som Yehowa.